LADY Lockheed L-188 Electra Passenger & Cargo FSX - Rikoooo
Downloads 23 779
Mpanoratra: Team FS KBT: Daisuke Yamamoto, Hiroaki Kubota, Paul Strogen, William.C.Schulz, Victor.Merculief Jr
Ny Lockheed L-188 Electra no voalohany turboprop fiaramanidina naorina tany Etazonia. Ny sidina voalohany natao tao 1957. Ny fampisehoana ihany ambany kely noho ny an'ny fiaramanidina fiaramanidina, ny vola lany amin'ny fandidiana ambany. (Source Wikipedia)
Fiaramanidina mahafinaritra, tsara tarehy modely amin'ny Gmax FSX Miaraka amin'ny 3D anatiny, feo mahazatra sy asa be dia be, ny kalitao avo lenta. Tsy maintsy manome izany ezaka izany ianao.
Ny malaza L-188 Electra dia flyable amin'ny mpandeha sy ny freighter pirinty. Maro textures misy
Mety misy olana misy anao amin'ny DirectX10 miasa ao FSX